Kuyathokozisa ukubona abantu abamnyama besungula ama-brand abo, kuloba uNtokozo Biyela - Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News
KULE ngosi ngithanda sibheke into encomekayo engiyibona yenzeka eNingizimu Afrika. Uma uqaphelisisa, uzobona ukuthi ayanda ama-brand amasha asungulwa ngabantu abamnyama kanti nabantu bakithi sebethanda ukuthenga ama-brand asungulwe ngabakubo kunawakwamanye amazwe.
Kuhle-ke ukubona loku kwenzeka ngoba njengoba ngake ngasho, iyodwa indlela yokuthi sibuyisele umnotho ezandleni zethu thina bantu abamnyama – wukuthi sizenzele thina izinto, singanciki kwabanye abantu ngezinto eziqondene nathi. Ngake ngabalula ukuthi ezinye izizwe zimile nje futhi ziphethe umnotho yingoba ziyazenzela izinto zazo ukuthi zakhe umnotho wazo futhi zivikele nekusasa lazo.
Kuyajabulisa-ke ukubona abantu abamnyama emkhakheni eminingi yamabhizinisi besukuma bezenzela ngaphandle kokuncika kwezinye izizwe.
Ngingaqala ngibalule leli ziko lezindaba Umbele abasunguli balo bathatha ikhono ababelisebenzisa besaqashwe ngamaphephandaba amakhulu ezweni bathi nathi ngamava esinawo sizosungula iziko lethu lezindaba zamabhizinisi zesiZulu ngoba bebona isidingo salo.
Kwezengqephu uzobona ukuthi sekukhona ama-brand afana noBathu, oDrip, oMaxhosa, oQhawekazi Styles, oSiko Republik, o-African Renaissance namanye.
Wonke la ma-brand ezimpahla zokugqoka namateki asungulwe futhi aphethwe ngabantu abamnyama. Loku kuthokozisa kakhulu. Kukhombisa ngokusobala ukuthi ingxenye yosomabhizinisi yamanje isicabanga ngenye indlela, akuseyona inhlobo yakudala ebiyenza uhlobo lwamabhizinisi oluzophela nayo uma ingasekho.
Inhlobo yamanje yakha umlando ngamabhizinisi ewasungulayo. Kuhle futhi kuyancomeka loku. Kusho ukuthi singabantu abamnyama sesiyazigqaja ngezinto zethu. Kuhle futhi ukubona nokuthi la mabhizinisi ayasabalala ezweni lonke njengawo wonke amabhizinisi aphethwe ngezinye izinhlanga.
Ngenyanga edlule ngike ngayosebenza eGoli, ngabona ama-billboard amakhulu eDrip esabalele idolobha lonke. Siyazi-ke sonke ukuthi kubiza kangakanani ukukhangisa kuma-billboard eGoli. Loku kwasho kimina ukuthi abaphathi beDrip bakuqonda kahle ukubaluleka kokukhangisa imikhiqizo yabo ukuze ithengwe kakhulu.
Ngibuye ngabona eThekwini enxanxatheleni yezitolo iPavillion ukuthi zombili lezi zitolo iBathu neDrip sezivule izitolo ezithengisa izimpahla zazo. Konke loku kuyancomeka.
Uma ubhekisisa uzobona futhi ukuthi izinkampani ezifana noNike, iPuma, i-Adidas, iReebok neLe Coq Sportif sezivule izitolo zazo kuzo zonke izinxanxathela zezitolo lapha eNingizimu Afrika; azisakhosele ezitolo ezidayisa izinto zemidlalo njengakuqala.
Kuyacaca ukuthi ukuqhudelana kuyanda kule ndima yezimpahla zemidlalo nokungcebeleka. Enye inkampani esizakhele isasasa ngezinto ezenzayo yiSiko Republik. Lena inkampani eyenza izimpahla zokujima nezemidlalo. Ingenise kwezwakala. Ngithanda ukuyibiza nge“Nike yaseWakanda” ngoba inhloso yayo wukugcina isinkulu njengeNike yaphesheya kodwa ibe izinze e-Afrika.
Nami ngithe uma ngibheka ukukhula kwemboni yezimpahla zezemidlalo ngathi ngeke ngisasala. Ngikhuluma nje ngiphezu kwamalungiselelo okwethula i-brand yami iBigsod.
Kwaseboyibonile, likhulu isasasa futhi bayayithakasela. Iphupho lami wukuthi le nkampani igcine isiyaziwa umhlaba wonke kodwa-ke inhloso enkulu wukuthi ngiyakhela ukuthi igcine isiphethwe yizingane zami zonke ngothi lwazo. Ngiyazi okwamanje zisacabanga ukuthi yibhizinisana. Kepha ngiloku ngizitshela ukuthi kufanele zizibandakanye naleli bhizinisi lisaqala ngoba ngilakhela zona. Ngelinye ilanga liyothi selisabalele umhlaba wonke, zisho ukuthi zazikhona lisungulwa futhi lakhiwa.
Yilona bhizinisi engithemba ukuthi izingane zami ziyohlomula ngalo ngisho ngingasekho ngenxa nje yegama lalo. Ngakho-ke asiqinisekise ukuthi sakha amabhizinisi ayosala noma singasekho.